Ihe niile gbasara Melanotan-II / MT2
2. Melanotan-II Nzaghachi nzaghachi
3. Gịnị mere Melanotan-II ji ewu ewu?
4. Melanotan-II na-ebu ihe ize ndụ ọ bụla?
5. Kedu ka m ga-esi gbanye Melanotan-II usoro ọgwụ?
6. Kpee ihe Melanotan-II a pụrụ ịdabere na ya n'ịntanetị
Melanotan II, alpha-Melanocyte hormone na-akpali akpali, Peptot peptid, ma ọ bụ MSH bụ otu ihe dị iche iche nke sịntetị nke hormone peptide nke na-eme ka melanogenesis (usoro nke na-akpata ịba ụta nke akpụkpọ ahụ) n'ime ahụ.
A na-ejikarị emepụta ihe na-emepụta ma na-egbu egbu peptide hormone iji mee ka mmetụ mma mmekọahụ dịkwuo mma na ime ka akpụkpọ ahụ dị nro. Ọgwụ dị n'etiti ndị peptide iwu maka ire ere, rere ya na mpempe akwụkwọ nke a na-emesị rụzie maka injections subcutaneous.
E mepụtara Melanotan II na 1990s na Mahadum Arizona. Onye na-ewu ewu bụ onye na-ahụ maka ọgwụ ahụ bụ Norman Levine, ìgwè ndị na-eme nchọpụta bụ ndị na-akpata ọgwụ ndị e ji frogs mee iji chọpụta ịdị irè na nchekwa nke hormone a maara dị ka Alpha MSH tupu ya eji ya na ndị mmadụ. Na hormone mere ka ogbugba nke pigments nke frogs jiri na nnwale ahụ.
Mgbe ha kwadoro irè Alpha MSH na darkening frog skin pigments, ha gbanwere Melanotan II peptide n'ụzọ ga-eme ka ahụ mmadụ dị mma ma tinye ya site na ọnwụnwa. N'oge ule ahụ, otu n'ime ndị ahụ were ọgwụ ọjọọ kọọrọ Levine na ọ nọ na-enwe mmepụta ihe na-enweghị isi n'ihi ya.
N'ịkọ akụkọ ndị dị otú a, òtù ndị nyocha ahụ rụkwara ọganihu ọzọ dịka ịchọpụta Melanotan-II uru na-echegbu onwe ya site na ịchọpụta Bremelanotide (PT-141), ụdị nhụsianya lekwasị anya na ọgwụ. Ma Melanotan II peptide na Bremelanotide nwere ikike ma nye ha ikike irere ma jiri ya rụọ ọrụ maka ụlọ ọrụ ndị na-amụ banyere ihe ndị dị mkpa maka ịzụlite ọgwụ ndị bara uru.
Melanotan II na-arụ ọrụ site na ịkwalite ụfọdụ ndị na-anabata melanocortin, na-eduga n'ịgbasa akpụkpọ anụ, na-arịwanye elu na-enwe mmekọahụ, na-eme ka ọgwụ na-egbu egbu ma na-ebelata agụụ. N'ime nnyocha e mere iji nyochaa mmetụta Melanotan 2 na-eri nri, a chọpụtara na hormone peptide megharịrị melanocortin (Central) mgbe a na-enye ya nri ma nye ya ụmụ oke.
Ụmụ oke ndị e ji mee nnyocha ahụ belatara anụ ahụ na viscera anụ ahụ na-esochi ọgwụ ụbọchị isii na Meptotan peptide. Ọzọkwa, ihe ahụ mere ka e wepụ ihe oriri caloric nke ụmụ oke.
Nchoputa a bu ihe doro anya na Peptide Melanotan nwere ike inyere ndi choro iwepu ufodu ibu, karia obese na ibu ibu, ka ha belata ihe ha na-eri mmanu carbohydrate na calorie.
2. Melanotan-II Nzaghachi nzaghachi: Melanotan-II tupu na mgbe
Ka anyị lee anya na Nyocha Melanotan-II nke ndị na-eji MT2 (121062-08-6) mee.
Tammy: Ọrụ m gụnyere itinye ọtụtụ oge n'èzí na n'oge ụfọdụ, enwere m ọmarịcha ọkụ. Enwere m obi iru ala na akpụkpọ anụ m nke na agbachara m ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ngwaahịa ọ bụla na-ekwu na ha ga-enye nchedo anyanwụ ma ọ dịghị nke n'ime ha nyere m ihe m chọrọ. E mechara gwa m na MT2 na nsonaazụ ya dị ịtụnanya. Enwere m ihe mgbagwoju anya na ọ bụghị naanị mma ma na-eguzogide ọgwụ mgbochi anyanwụ.
Chris: Dị ka o kwesịrị si dị, m na-ehicha mmiri na-egbuke egbuke ma na-egbuke egbuke. Otú ọ dị, ọ bụ ezie na enwechaghị m iru ala na ọdịdị m dị elu na nbibi nke mberede, enwere m obi mgbagha iji iji ngwaahịa tanning. Otu ụbọchị, ekpebiri m ka m chee okwu ihu na ihu! A sị ka e kwuwe, ndụ dị mkpụmkpụ iji nwee mmetụta na-erughị eru. M kpebiri na ọ bụ oge Melanotan zụrụ ma gaa maka otu ụbọchị ahụ mgbe ọrụ gasịrị. Nke a bụ otu n'ime nhọrọ kachasị mma m meworo n'oge ndụ m. Maa amụma..! Enwetara m ihe na-acha aja aja na-acha aja aja ma ọ bụrụ na elekere isii na-eleta m. Enweghị m ike ikwere ya. Anọ m na-eji ya eme ihe n'okpukpe kemgbe ahụ ọ dịghịkwa akwa ụta ọ bụla.
Laura: Nanị m hụrụ ihe a. N'ime ndị peptide iwu niile maka ire ere m na-eji eme ihe, ọ bụ Melanotan-II naanị nke nyere m kpọmkwem ihe m na-achọ - ụda gbara ọchịchịrị na ogologo oge. Ana m eme otu ugboro n'izu, n'ihi ya kwa, enwere m obi ụtọ maka akpụkpọ anụ m. Kedu ihe a na-emekarị na mbaracetam: gịnị ka ọ na-enye anyị?
N'adịghị ka mbụ mgbe ọbụla m nwetara sunburns ọbụlagodi mgbe obere anyanwụ na-apụta, ugbu a anụ m na-eguzogide ọgwụ dị otú ahụ. Nanị nsogbu Melanotan-II m nwetaworo bụ ịgba aghara n'oge mbido ụbọchị mbụ, ma esemokwu ahụ ji oge. Ọ bụrụ na ị bụ onye ọcha ma chọọ ịnweta ezigbo isi tan, m ga-agwa gị ka ị nwalee ngwaahịa a.
Ebere L: Achọpụtala m ụmụ agbọghọ ndị gbara ọchịchịrị mara mma karịa m. Enwere m egwu iji ụfọdụ ngwaahịa tanning na ahịa n'ihi na e nwere ọtụtụ akụkọ ndị a kọrọ na ha nwere nsogbu ọjọọ. Enwere m obi ike iji MT2 hụ mgbe ọ gbanwere otu n'ime ndị enyi m.
Mgbe m malitere iji ya mee ihe, o juru m anya ịchọpụta na Melanotan-II abụrụghị ihe mgbu dịka m chere na agịga ahụ dị ntakịrị. M na-etinye onwe m 1 mg nke ọgwụ ọgwụ hormonal na mgbu kwa ụbọchị abụọ ma enweghi m mmetụta nke mgbu ahụ. Iji kpochapụ akụkọ dị mkpirikpi, enwere m mmasị n'ihe niile gbasara ngwaahịa a n'ihi na o nyeela akpụkpọ ahụ m. Dị ka nke a, enwere m obi ụtọ n'amara na m si na ọrịa cancer.
Salome Clinton: N'ịbụ onye sitere na Irish, anụ m dị ọcha. Tupu m achọpụta na iji Meptotan peptide, enwere m ike ịnweta ọkụ ọkụ ọ bụla n'oge okpomọkụ ọ bụla. Ma, ihe gbanwere nke ukwuu maka oge m malitere iji melanotan-II injections. Tan nke Melanotan-II tupu na mgbe ọkọchị bụ otu. Agaghị m atụ egwu oge okpomọkụ n'ihi na ngwaahịa a na-enye m akpụkpọ ahụ nchebe ọ chọrọ ịnọgide na-enweghị ntụpọ n'ime afọ. Ọ bụ ngwaahịa nke m nwere ike ịkwado ndị ọzọ na-enweghị ike ịchọrọ ịgbakwunye akpụkpọ anụ dị mma.
Tony: Akụkọ m na-adọrọ mmasị. Mgbe m gbanwere 40, libido mịpụtara dị ntakịrị, ikekwe n'ihi ụdị ọrụ m malitere ịme. Eji m oge kachasị mma nke oge m, nke a mekwara ka m nwee ọnyá dị ukwuu n'ihi ụda ọkụ ọkụ.
Mgbe m na-egwu sọfụ na Ịntanetị, eburu m na post gbasara Melanotan-II Benefits. O juru m anya ịchọpụta na e nwere ọgwụ ọjọọ nke ga-eme ka m nwekwuo ọgwụ ma nye m nchekwa UV.
Mgbe m jiri ngwaahịa a maka ọnwa 10, enwere m ike iji obi ike kwado na ọ dị irè na ike abụọ. Mụ na nwunye m na-enwe mmasị n'ịhụ anyị n'anya dịka anyị mere n'oge iri abụọ anyị dị na mbụ mgbe anyị lụrụ di ma ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ m na-agba ọchịchịrị. Enweghịzi m ahụ ọkụ na-acha mgbochi n'agbanyeghị na m ga-ahụ anyanwụ.
Sandra: Ee! Enwere m ike ịnweta oge ezumike m n'ụsọ oké osimiri na-enweghị atụ egwu banyere ịda mbà, ekele Melanotan-II Ihe. Nke a bụ ihe m na-anụtụbeghị kemgbe afọ ole na ole n'ihi na anyanwụ dara oké njọ n'anya anụ ahụ m hụrụ n'anya.
Enweghị m ikele ekele maka onye ọ bụla zitere ngwaahịa a. E wezụga akpụkpọ ahụ m na-eleba anya, ahụ m dịkwa mma. Enweela m ihe dị arọ karịa oge m ji ọgwụ ọjọọ eme ihe. A bụ m sọ anụrị.
Raphael: Ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ọcha, ị nwere ike ịghọta nke ọma mgbe m na-ekwu oke ókè nke anyanwụ nwere ike ịkpata gị. ebe m bụ nwata ruo otu afọ gara aga mgbe m matara banyere MT2, m na-agbalị ka m nwee ike izere anyanwụ ma jiri ihe kpatara 50 + maka nchekwa UV mana nke ahụ enyereghị aka.
N'agbanyeghị nke ahụ, n'oge ụfọdụ, karịchaa n'oge okpomọkụ, ọkụ anyanwụ na-agba m ọkụ. N'afọ gara aga achọpụtara m banyere peptide Melanotan na enwere m obi ụtọ ịkọ na ihe a enyere m ndụ. O mere m ọla kọpa n'ime ụbọchị ole na ole iji ya.
Anụwo m ụfọdụ ndị na-eme mkpesa banyere mmetụta ndị dị na Melanotan-II ma ọ dịtụbeghị mgbe ọ bụla ọzọ na-enweghi ịba ụba nịbido bụ nke m gbakwunyere. Enwere m ike ịnweta ọrụ niile a na-eme n'èzí ọbụna n'oge mgbe anyanwụ na-ekpo ọkụ n'ihi na echere akpụkpọ m ka ọ ghara ịdaba.
Khalid: M na-eji Melanotan-II eme ihe mgbe nile ma mgbe ogologo anyanwụ gasịrị, ọ na-arụkwa anwansi. Ndị maara m nwere ike ịghọta otú egwu m si bụrụ ihe n'oge okpomọkụ n'ihi ụda mmiri ma ugbu a ọ bụ ihe dị n'oge gara aga.
M na-ama jijiji na akpụkpọ anụ gbara ọchịchịrị (bụ nke dị na mbụ). E wezụga nke ahụ, achọpụtarala m na libido m amụbaala na di m anaghịzi eme mkpesa gbasara enweghị afọ ojuju. Ekwadoro m ngwaahịa a.
3. Gịnị mere Melanotan-II ji ewu ewu? / Melanotan-II Uru
Dịka ụfọdụ ndị na-agbalị imebi ahịa ndị peptides, karịsịa Melanotan-II, ma mee ka ndị mmadụ ghara iji ha eme ihe, ihe ka ọtụtụ ná ndị na-enweghị ụbụrụ ma nwee mmeju Melanotan enweghị ike ịnọ jụụ. Ha mejuru afọ ojuju Melanotan-II ma nọgide na-atụ aro ndị ọzọ na ọgwụ ahụ. N'ihi ya, mmuta nke melanotan na-abawanye kwa ụbọchị.
Otu akụkọ nke BBC na 2009 tọhapụrụ gosiri na ọtụtụ narị mmadụ eletala ọhụụ isii dị mkpa n'ime oge ole na ole iji nweta nhazi maka nchịkwa nke ziri ezi Melanotan dosages. Na 2010, Association Norwegian Pharmacy kọrọ na e nyewo ndị chọrọ Melanotan-II injections ọtụtụ puku sringes. Isi uru Melanotan-II gụnyere akpụkpọ anụ, welie libido na ọnwụ abụba.
★ Ọchịchị gbara ọchịchịrị
Inwe akpụkpọ anụ dị ọcha abụghị ihe ọtụtụ ndị na-achọ dị ka mgbagwoju anya bụ nke nwere ike ịdaba n'ọkụ na ọrịa cancer. N'ụzọ dị nro, ọbụlagodi na a mụrụ gị na akpụkpọ ahụcha, i nwere ike itinye ya na tan site na ịṅụ ọgwụ a pụrụ ịdabere na ya iji mee ka mmepụta ụcha akpụkpọ anụ na-agba ọchịchịrị. N'ọnọdụ dị otú ahụ, melanotan-II abaghị uru.
N'ịzaghachi na Verdens, akwụkwọ akụkọ Norwegian, banyere ma ọ na-eji Melanotan-II emechi ihe, Linn Connie Danielsen enweghị ihe ọ na-ekwu banyere akpụkpọ anụ Melanotan. O kwuru na ọgwụ ọgwụ ọjọọ na-enye ya nnukwu tan na ogologo oge nile n'afọ nakwa na ọ dị nnọọ mpako maka ọdịdị ya. O kwukwara na ọgwụ ọgwụ ọjọọ na-eme ka mmetụta nhụsianya nke nnukwu anwụ buru oke n'oge oge oyi.
E nwere uru atọ dị mma nke Melanotan-II, mana isi bụ ikike iji gbanye ụdị anụ ọ bụla n'agbanyeghị na afọ ole ọ dị.
Ọ bụrụ na ị naghị enwe ntụsara ahụ na akpụkpọ ọcha gị ma chọọ ịnye ya tan, ị ga-achọ ịma ụdị akpụkpọ gị dị ka ọnụ ọgụgụ Fitzpatrick tupu ịmalite njem iji nweta akpụkpọ anụ Melanotan. Ịmara ụdị akpụkpọ ahụ gị na-enyere aka n'ịkwado Melanotan dosages kwesịrị ekwesị maka ụdị akpụkpọ ahụ gị.
Okwesiri iburu n'obi na ndi mmadu ndi di elu nke Fitzpatrick (ihe di iche iche 1, 2 na 3) bu ndi nwere ike inweta aru ocha na Melanotan na oge kachasi ka eji tụnyere ndi ozo .
Ọ bụrụ na akpụkpọ ahụ gị nwere ntakịrị akara nke agba aja aja (ụbụrụ), mmetụta nke Melanotan-II ga-enyere gị aka inwe ụdị mgbagwoju anya ma ọ bụrụ na ị na-aṅụ ọgwụ ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị. Ka oge na-aga, ị ga-ahụ ugbo na akpụkpọ anụ ndị ọzọ. N'ikpeazụ, ị ga-enwe ụda olu gị.
Ọ dị mkpa ka ị buru n'uche na Melanotan nwa akpụkpọ mmetụta ga-adịru ogologo oge ma e jiri ya tụnyere okporo ọkụ nkịtị. Dị ka o kwesịrị ịdị, mgbe ị na-ekpughere ìhè anyanwụ, ọkpụkpụ akpụkpọ ahụ gị na-agba ọchịchịrị n'ihi mmepụta melanin iji kpuchie oyi akwa n'okpuru akpụkpọ gị (hypodermis) site na ike ọkụ nke anyanwụ. Ya mere, a na-agba ọkụ dị ka ọta.
Ka o sina dị, ọ bụrụ na ị nwere akpụkpọ ọcha, ị ga-achọpụta na akpụkpọ gị na-efunahụ tan na ọ na-enweta n'ihi ìhè anyanwụ na-adịru nanị izu ole na ole, nke kachasị otu ma ọ bụ abụọ, mgbe ị kwụsịrị ịhụ ìhè anyanwụ. E kwuwerị, akpụkpọ ahụ adịghị mkpa iji mepụta nchebe ọzọ (melanin) n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla na-eme ka ọ ghara imebi ya. Nke a na-akọwa ihe mere ị ji ghọọ ezigbo ọcha / ìhè n'oge oge oyi ma ọ bụ ma ọ bụrụ na ị na-anọkarị n'ime ụlọ.
N'aka nke ọzọ, akpụkpọ anụ Melanotan nke sitere na peptide tan na-ejikarị adịru ogologo oge karịa tan tan. Ọ na-anọkarị ruo ọtụtụ ọnwa mgbe ị kwụsịrị ịghara igosi anyanwụ. Ngwongwo nke Melanotan bụ ihe niile ị ga - achọ iji mara mma na akpụkpọ ahụ mara mma n'agbanyeghị oge a.
Dịka e kwuru na mbụ, akpụkpọ ahụ dị ọcha nke na-acha ọcha bụ nke nwere ike ịrịa cancer karịa nke a mara mma. N'ileba anya n'ihe ize ndụ ahụ, nzube mbụ nke ịmepụta Melanotan II bụ iji gbochie ma ọ bụ belata ihe ize ndụ cancer cancer site na ịmepụta mmụba nke mmepụta melanin. Semaglutide mmetụta naanị dị ka Peptide? Ee, Ọtụtụ Karịa Nke Ahụ!
Dị ka peptides iwu ndị ọzọ maka ire ere, mgbe ị na-eme ihe mgbakwunye Melanotan, ọ na-akpali ahụ gị iji mepụta mịlị na ọkwa dị elu karịa nke nkịtị. Ebe ọ bụ na melanin bụ isi ihe na-egosi ụcha akpụkpọ ahụ gị, mmụba ọ na-eme na-eduga n'ọkpụkpọ gbara akpụ.
Ọtụtụ ndị na-acha uhie uhie na-acha uhie uhie enweghi ike ịnweta akpụkpọ anụ karịa ọchịchịrị. Nke ahụ bụ eziokwu! Hà ga-echefuru na ha ga-agba ọchịchịrị karịa nke ahụ?
N'ezie, Ee e!
N'ihi na Melanotan nke Abụọ, ha nwere ike ime ka akpụkpọ ahụ ha gbaa ọchịchịrị dị ka o kwere mee!
N'ihi usoro a, Melanotan II nwere ike ichedo akpụkpọ ahụ gị pụọ na mmebi ihe na-eme ka ọ ghara idi egwu cancer.
★ Enweela libido
A bịa n’ihe gbasara mmekọahụ, dị ka ịba ọcha n’anya, ụfọdụ mmadụ na-ahọrọ ijikwa ha aka nke onwe ha kama ịga na nke dọkịta iji zere ime ihere. Ndị ọzọ ejighi mkpuchi ma ọ bụ ejighi mkpuchi mkpuchi zuru oke iji nweta ọrụ ahụike ụmụaka.
N'ụdị ndị a, ọgwụ mmelite arụmọrụ nke na-adịchaghị mkpa ịkọ ndenye dọkịta na-abịa n'aka. Ikike mwepụta nke Melanotan bụ nanị ihe anwansi.
Na mgbakwunye na inye nsonye anụ ahụ sitere n'okike, Melanotan 2 na-akwalite agụụ mmekọahụ (libido). Menmụ nwoke na ụmụ nwanyị ndị chọrọ ka ha na ndị mmekọ ha nwee mmekọahụ dị mma nwere ike iji ọgwụ a. Ọ na - enye ụmụ nwoke na - arịa ọrịa na - eme ka ọ gbasie ike ma sie ike na mkpokọta ụmụ nwanyị.
Ọ bụ ọgwụ nwoke nwere oke nwere ike ịtụkwasị obi maka inwe agụụ mmekọahụ ọ ga-enwe. Nke ahụ kọwara nke ọma ihe kpatara Melanotan ọgwụgwọ dysfunction abamuru bu ihe karia n'etiti umu akwukwo di ka udi aru ndi di egwu.
Na mgbakwunye na ịba ụba nke ere ere n'ime nwoke, melanotan mgbakwunye nwekwara ike ime ka o nwekwuo ihe ndị ọzọ site n'ibilata oge na-agbanwe agbanwe. Ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ka ị hụkwuo mma n'anya na akpụkpọ anụ nke na-adịghị ike ịrịa kansa na ọkụ, na-eji Melanotan II yiri igbu mmadụ abụọ na-eji otu nkume.
Ka o sina dị, nzube bụ isi nke Melanotan 2 bụ ntutu akpụkpọ anụ, ya mere, ọ bụghị onye ọ bụla nke na-eji ya ga-enwe mgbanwe n'ọchịchọ mmekọahụ ha. N'ọnọdụ ebe ọgwụ na-emetụta agụụ mmekọahụ, o yikarịrị ka onye ahụ ọ ga-enwe mmetụta 1 gaa na 3 awa mgbe ọ gwọchara ya. Mmetụta kachasị dị na 2 ka 4 awa.
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta mmetụta a nke Melanotan 2, wepụ ọgwụ ahụ tupu ị lakpuo ụra. Site n'ime otú ahụ, dịka ọgwụ ahụ ga-eme ka ahụ gị nwee ike ịmalite inwe mmekọahụ, ụbụrụ gị ga-adị oke ụra iji mezie ihe a chọrọ ya, n'ihi ya, ị gaghị enwe mkpali. Ma ọ bụghị ya, ịnwere ike ichere maka mmetụta ahụ ma nwee oge dị mma na ịhụnanya gị.
★ Melanotan-II abụba abụba
Ewezuga ụba libido, mmetụta ọzọ na-anọpụ iche nke M2 bụ abụba abụba.
Na nyocha nke Melanotan II na-eduzi na ụmụ oke, ndị nchọpụta ahụ chọpụtara na ụmụ oke ndị e nyere ọgwụ n'oge ọmụmụ ahụ enwechaghị anụ visceral na subcutaneous site na njedebe nke ule ahụ ma e jiri ya tụnyere otú ha sibu n'ihu nchịkwa nke ọgwụ. Nke a bụ ihe doro anya nke Melanotan-II abụba abụba ike.
Ya mere, ọ bụrụ na ị bụ ngwaahịa a ma ọ bụ na ọ dịghị mma maka ịdị arọ gị, Melanotan-II abaghị uru abụba ga-eme ka ị na-atụgharị na ọdịdị ahụ dị mma ma mara mma. Melanotan-II ụgwọ bụ n'ezie uru ị na-enweta site na ọgwụ ahụ ọ bụrụhaala na ọ bụ site n'aka isi Melanotan-II.
Melanotan nke Abụọ na-egbochi agụụ gị na nke ahụ bụ otu ụzọ isi enyere gị aka idafu abụba. Ya mere, ọ bụrụ na ịṅụ ọgwụ ọjọọ, ọ ga-abụrịrị na ị ga-eri obere karịa ka ị na-eji mee ihe, nke a na-enyekwa ụda uru dị egwu. Ọ na-enyere gị aka izere ọchịchọ ndị na-achọghị na ịrapara nri gị n'enweghị nsogbu
Nke abuo, ikike nke Melanotan nke Abụọ iji belata abụba nnwere onwe na-emepụta ihe na-abaghị uru n'ọtụtụ uru. Ọ bụ ụzọ ọzọ M2 nwere ike isi nyere gị aka belata ahụ gị.
Ọfọn, enweghi mmetụta Melanotan-II na-adịte aka bụ nke a kọtụbeghị. Ka o sina dị, a chọpụtala na ụfọdụ ndị nwere ike ịnweta ụfọdụ ọgwụ mgbochi n'oge mbụ ole na ole Melanotan. Ihe ndị ọzọ metụtara Melanotan-II na-agụnye ọgbụgba dị nwayọọ ma na-ekpo ọkụ na ihu.
Ọ dabara na, mmetụta ndị a na-adịghị mma na-eme ka ọ dịwanye njọ oge oge ahụ gị na-edozi peptide.
O b ur u na i nweela obi ut o mgbe Melanotan dosages gachara, gbanwee oge izi ihe na nkeji ole na ole tupu i dina. Ọ bụrụ na nke a anaghị enyere gị aka, ị nwere ike ịmepụta ezigbo mgbochi nke ihe omuma otu awa tupu iwere Melanotan II ruo mgbe ị na-eji peptide eme ihe. Ọ bụrụ na ịchọrọ mgbochi histamine, ị nwere ike ịga na-ezighị ezi na mgbọrọgwụ ginger.
Ihe ọzọ ị ga-eme iji mebie ihe ndị Melanotan-II na-adịghị ahụ anya na-ekewa ụyọkọ gị ugbu a ka ọ dị obere. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị na-ewere 1mg dose, ị nwere ike kewaa ya abụọ 0.5mg doses ma were ha na oge ụfọdụ n'etiti. Okwesiri iburu n'uche na mmetụta di elu na-abawanye na onu ogugu; nke dị elu karịa mkpụrụedemede ahụ, ihe ka njọ.
Ọ dị mma ka ị hụ na ebe Melanotan-II dị adị tupu ịzụta peptide dị ka ndị ahịa na Melanotan-II dị ọtụtụ. Site na ime nke ahụ, ị ​​ga-ejide n'aka na ị na-eji ezigbo ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ bụghị ihe nwere ike ịmalite ime ihe ọjọọ karịa mma n'ahụ gị.
▲ Ịgbagharị ihu
Mgbanwe nke ihu na-eme n'ime minit 10 nke na-ewere Melanotan II mana ọ na-adịru nanị oge dị mkpirikpi, na-erughị awa. Otú ọ dị, i kwesịghị ichegbubiga onwe gị ókè ma ọ bụrụ na ịnweta ụdị dịka nhụsianya na-adịghị mma ọ ga-abụrịrị na ị ga-apụ na nke na-esote Melanotan-II injections ozugbo ahụ gị na-eji ọgwụ ọjọọ eme ihe.
▲ Ọkpụkpụ akpụkpọ anụ, mmịnye ọbara na ọrịa
N'iburu n'uche na e nwere ndị dị na Melanotan-II nke dị iche iche, ọ dị mfe ịzụta Melanotan. Ihe ịma aka na-abịa mgbe ị naghị enweta ntụziaka kwesịrị ekwesị ma dị mma banyere otu esi edozi ọgwụ ahụ maọbụ ọ bụrụ na ị kwụsịrị ịgbaso ha na leta ahụ.
Melanotan 121062-08-6 na-abịa n'ụdị uzuzu ma kwesŽrŽ ka ọ bụrụ na ọ ga-eji mmiri mmiri na-edozi mmiri tupu ya ejide ya. Ya mere, ọ bụrụ na mmiri ejighị ya, ọgwụ ahụ nwere ike ịba ọcha ma nke a nwere ike ibute nsogbu ahụike dị ka ọrịa.
E wezụga nke ahụ, sirinji eji eme ihe kwesịrị ịdị ọcha ma bụrụ nke mgbochi, ọ bụrụ na onye ahụ na-enweta ọgwụ ahụ, ọ ga-eme ka ọ bụrụ ọrịa. Ozokwa, ọ bụrụ na onye ahụ nwere ahụmahụ ejighị nlekọta ọgwụ ọjọọ eme ihe, ọ nwere ike ịkpata ọnyá.
Ihe ndị ọzọ na-emetụta mmetụta nke Melanotan-II gụnyere:
Ọtụtụ n'ime ha, mmetụta ndị a dị na ya na-esi na nkwụsị dị elu. Ya mere, otu n'ime nhọrọ iji belata ma ọ bụ zere ha bụ ịhọrọ oke dose.
Ọzọkwa, enwere mmetụta Melanotan-II ugboro ugboro mgbe a na-anwale ọnwụnwa, ha na-agụnye ọtụtụ ntụpọ, na-egbuke egbuke egbugbere ọnụ ma na-agba ọchịchịrị.
O kwesiri iburu n'uche na ka i wee nweta ihe kacha mma Melanotan; ị ga-eji Melanotan-II mee ka usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu. A ga-eji usoro ọzọ nke Melanotan na-agbaso usoro nkwụsị maka ntinye nchekwa ruo mgbe ị ga-enweta ụda anụ ụra gị.
E wezụga nke ahụ, ị ​​ghaghị ịhụ na ị gaghị ewepụta ma ọ bụ obere ọgwụ. Naanị gbanye ego kwesịrị ekwesị.
N'iburu n'uche na MT2 na-abịa dịka ntụ ọka ntụ ọka na-eme ka mmiri dị ọcha, ị ga-enwe ike ịmeghachite ya n'ụzọ ziri ezi site na iji mmiri ruru eru na mmiri na-asọ oyi tupu ya enye ya. A na-ere peptide Melanotan maka ojiji nkeonwe ya na 10mg nke ejiri 3ml tinye ya na 1ml ma ọ bụ 2ml nke mmiri mmiri.
Ọ bụrụ na ị maghị na ị nwere ike ịmeghachi peptide n'ụzọ ziri ezi, ịnwere ike iji akọrọ calculator peptide Lovemelanotan. I nwekwara ike iji ngwá ọrụ ahụ mee ihe n'ụzọ ziri ezi.
Ọ bụ ezie na e nwere ụzọ dịgasị iche iche nke inye Melanotan-II 121062-08-6 tinyere spraying (sprays nasal) na ilo (Melanotan supplementicles), na ogwu, nke ikpeazụ (injection) kacha mma. Mkpụrụ ndụ peptide na ngwongwo peptide Melanotan dị oke ibu, ya mere, ọ na-esiri ha ike ịbanye n'ime mmiri ahụ.
Nke ahụ dị iche na usoro ogwu nke usoro ọgwụ ntanye bụ 100%. Mgbe ọ na-abịa na ọgwụ, ha onwe ha kwa enweghị ike ịdị irè dị ka injections n'ihi enzymes ke afo nke na-eme ka peptide adịchaghị arụ ọrụ. Ngwakọta SARM na Top 10: SR9009 (1379686-30-2)
Ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ gị jiri Melanotan 2, ọ bụ ihe amamihe dị na ịmalite na obere ala, ọkacha mma n'ebe ọ bụla n'ime 50 mcg na 75 mcg ma jiri nwayọọ nwayọọ na-ebute ya na oge ka ị na-enyocha otú ahụ gị si azaghachi ya. Dịka e kwuru na mbụ, ịmalite na oke dị elu na-eme ka o nwekwuo ohere ịnweta nsogbu Melanotan-II dị ka ọgbụgbọ.
Ọzọkwa, gbalịa mee ka tanning sessions dị ka ụbụrụ oge dị mkpirikpi dị ka nkeji ma ọ bụ abụọ ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa n'oge ụbọchị mbụ, mgbe Melanotan zụrụ maka ụda akpụkpọ anụ. Nke a bụ n'ihi tanning maka ogologo oge mgbe akpụkpọ ahụ gị nwere obere melanin ga-eme ka njikarị gị na ọkụ dị ọkụ. Ka njedebe melanin na-abawanye na-akpatawanye akpụkpọ anụ Melanotan, akpụkpọ ahụ ga-echebe ya nke na ọ ga-abụ ihe na-esighi ike ịba ụra ma na-ere ọkụ.
Ozugbo ịghaghachite MT2 ka ọ bụrụ nke kwesịrị ekwesị, ọ bụ oge ugbu a iji dozie ya, ọrụ ị ga-eji sirinji insulin. Otu ihe ị ga-achọpụta banyere sirinji bụ na ọ bụghị naanị obere ma bụrụ akara na IU (Unite Units). Ọ bụrụ na ị na-eji ml, 100 IU yiri 1 ML. ya mere, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhazi 0.3mls, ị ga-atụle ọgwụ ahụ gaa na 30 IU akara na sirinji.
Ugbu a, ka anyị hụ otú e kwesịrị isi mee ya.
Ị nwere ike igba Peptide peptide n'okpuru anụ ahụ (subcutaneous) ma ọ bụ banye n'ime ahụ (intramuscular); n'ebe ọ bụla ị nwere ike ịbịaru ahụ gị. Kpochapụ akpụkpọ anụ ahụ ma wepụta ya iji mee ka agịga banye n'ime akpụkpọ anụ ahụ. A na-etinyezi MT2 banye n'ọbara ma gbasaa n'ozuzu ahụ gị.
Dị nnọọ ka ọ dị na peptides iwu ndị ọzọ maka ire ere, e nwere ọtụtụ Melanotan-II ndị ọrụ ntanetị na ntanetị. Ma, ha niile na-ere ezigbo ngwaahịa ma na-eji Melanotan-II kwesịrị ekwesị na ọnụahịa ha? Azịza ya bụ ee e.
Ụfọdụ ndị na-emepụta ihe na Melanotan-II na-ere ahịa Melanotan-II na-ere ahịa ego dị oke ala iji mee ka ọnụ ahịa buru ibu buru ibu na ndị ahịa kwesịrị inweta ego ha.
Dị ka ndị dị otú ahụ, ọ dị mkpa na ị ga-arụsi ọrụ ike tupu i họrọ ebe Melanotan-II. Otú ọ dị, ebe ọ bụ na ị nwere ike ọ gaghị enwe oge niile iji gwupụta miri emi ịmata ọdịiche dị n'etiti quack na ezigbo ndị na-ere ya, anyị ga-achọ ịzọpụta gị nsogbu ahụ site na ịbata gị Phcooker.com.
Phcooker.com bụ otu n'ime ndị a pụrụ ịdabere na ya Melanotan-II ndị na-eweta ọrụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta Melanotan-II (121062-08-6) enweghị isi, isi Melanotan-II ka ị kpuchie. E wezụga nke a, nke a bụ Melanotan-II kachasị mma maka ego Melanotan-II kasị asọmpi.
Wessells, H., Levine, N., Hadley, ME, Dorr, R., & Hruby, V. (2000). Melanocortin agonists, penile erection, na akpali agụụ mmekọahụ: ọmụmụ ụmụ mmadụ na Melanotan II. Akwụkwọ akụkọ ụwa nke nchọpụta adịghị mma, 12(S4), S74.
Evans-Brown, M., Dawson, RT, Chandler, M., & McVeigh, J. (2009). Iji melanotan I na II n'ime ndị mmadụ niile.
Nelson, ME, Bryant, SM, & Aks, SE (2012). Melanotan II ọgwụ nke na-akpata ọgwụ na-egbu egbu na rhabdomyolysis. Clinical Toxicology, 50(10), 1169-1173.
Heijboer, AC, Van Den Hoek, AM, Pijl, H., Voshol, PJ, Dokes, LM, Romijn, JA, & Corssmit, EP (2005). Nchịkọta nke na-eme ka mpi nke melanotan II na-eme ka insulin nwee mmetụta nke mkpofu glucose na ụmụ oke. Diabetologia, 48(8), 1621-1626.
Breindahl, T., Evans-Brown, M., Hindersson, P., McVeigh, J., Bellis, M., Stensballe, A., & Kimergård, A. (2015). Nyocha na njirimara site na LC-UV-MS / MS nke melanotan II anụ akpụkpọ anụ na-ere na-akwadoghị na Ịntanetị. Ọgwụ nyocha na nyocha, 7(2), 164-172.
Li, G., Zhang, Y., Wilsey, JT, & Scarpace, PJ (2004). Nkpọrọgwụ na-eme ka melanotan II na-eme ihe na-adịghị mma ma na-enwekwu mmelite nke na-eme nri na-edozi ya n'agbanyeghị na mkpụrụedemede ntinye 3 na 4 melanocortin melanocortin. Akwụkwọ nke Endocrinology, 182(1), 123-132.
Nwa nwanne nna m tụụrụ m websaịtị a. Amaghị m ma ọ bụ ya dere ya maka na onweghị onye ma ihe zuru oke banyere nsogbu m. Ị bụ ọmarịcha!